Kusvuta muhutano kune migumisiro yakakomba
Kuenda kune imwe nyika nekuda kwekusvuta panguva yekuzvitakura
Kuwedzera kwechirwere chekenza kwete kwete chete nemukadzi anoputa
Kunyanya kurega kusvuta pakuberekwa
Maererano nehuwandu hwevanhu, vanosvika 30 muzana yevasvuta vanoramba vachishandisa fodya yavo pakutanga kwepamuviri. Pakati idzi, hafu yavo inokwanisa kuchengeta mavoko avo kubva pazviedza zvinopenya mukati memwedzi yokutanga yekudzivirira. Kusvuta panguva yekudzivirira kunobatsira zvikuru.
Kusvuta pakuberekwa - kune migumisiro inoshamisa
Nezvimwe zvose, pamusoro pe15 muzana, zvisinei, iyo nicotine inodhaka yekutsvaira inotora hupenyu hwezuva nezuva huchakuvadza mwana wako nemaune.
Kusvuta mukati mechizvaro ndiko kubvisa!
Chinyorwa chekutanga chechirasi chinoratidza utoro hwehusi hwemai panguva yekuzvitakura
Sezvo meconium - kana kuti colloquially zvakare seMutambo - inotsvaira sachigaro wekutanga mushure mokuberekwa, iyo yakanyanyiswa nechecheche. Iyi mafomu atove akaumbwa kubvira pamwedzi wechina wekuzvimba. Iyo ine yakawandisa bile, masero emukati membrane uye yakamedza amniotic fluid, iyo inogona kuva nemakero emasero eganda nemvere.
Kutsvakurudza kwakaratidzawo kuti inogona kuonawo kusvibiswa uye metabolite zvinodhaka zvakapedzwa mukati memwedzi yekupedzisira ye6 yekudzivirira. Zvisinei, kuongororwa kwakajeka kwehuwandu hwehutsi iyo amai vakaratidzirwa panguva yekuzvitakura hazvibviri.
Sezvinotarisirwa, vanachiremba uye nyanzvi vanokurudzira kuti vasaputa pavanenge vachiita pamuviri. Kunyanya, kukura kwema fetus hakuna kukwana uye njodzi yekukurumidza kana, kana yakaipisisa, kubvisa pamuviri kunowedzera nenzira yakasimba. Uyezve, njodzi yekusagadzikana kwakafanana nemakumbo akaremara kana nhengo dzinowedzera.
Mukuwedzera, zvakave zvichiratidzwa kuti vana vanoberekwa mukusvuta vakadzi vane pamuviri vanowanzofungidzira 200 girasi kupfuura chiya chepamuviri. Ichi ndechokuti, semugumisiro wekusvuta, mishonga yeropa amai yakaoma.
Nokudaro, rubatsiro runopfurikidza netambo yeumbilical inoderera uye mwana anowana michina shoma uye oksijeni inopiwa, iyo inogara ichikanganisa kuwedzera nekukura kwayo. Mukuwedzera, mukana wekutapukirwa kwekupedzisira kana mwana kufa rufu inenge kaviri kana yakakwirira.
Zvidzidzo zvakaratidza kuti kusvuta vakadzi vane pamuviri vanoenda nguva dze13 pazuva nokuda kwekunhuwa. Kuwedzerwa kuhuwandu hwehutachiwana hwemwedzi mipfumbamwe, izvi zvinoguma nezve fodya ye3600. Kana kunyange iyo makemikari e4000 aiva mune utsi hwefodya, iyo inowanzove yekemikari uye ine tsvina, inofungidzirwa, inogona kuva chinhu chakaipa.
Ichokwadi kuti vanosvuta vanotora ngozi yakawandisa yepamusoro yekenza yakawanda inozivikanwa kwenguva yakareba. Asi kunyange nemwana ari kusvuta panguva yekuzvimba, nheyo dzechirwere chinotevera chinowanikwa nekenza. Panyaya iyi, chidzidzo cheGermany Cancer Research Center chakawana kuti vanaamai vanosvuta fodya panguva yekuzvimba ndeye nguva ye1,5 inowanzova nekanyara uye yepamusoro yepamusoro yeukondombera. Mumukenza wemapapu ndeye 1,7-fold yakawedzera uye mune kenza yemapfupa kunyange katatu.
Saka, kuguma kunogona kungoitika kuti vakadzi vane pamuviri vanofanira kunyatsorega kusvuta. Izvo hazvisi kungobatsira chete mwana asati aberekwa. Amai vachakwanisawo kuona zvakakonzerwa nekupedza kusvuta mushure memaawa mashoma. Nokudaro, mushure memaminitsi e20, kudonha kweropa uye moyo wemazinga zvinogona kuonekwa. Maawa masere masere, iyo carbon carbon monoxide muropa iro inodonha madonhwe. Izvi zvichacherechedza mwana wacho nokukurumidza, nokuti iye zvino unowanawo kukwana kwakakwana kweokisijeni nemuviri.
Apo kusvuta kunorambidzwa, zvakadaro, vanogara navo kana shamwari dzehupenyu nevarume vevakadzi vane pamuviri havafaniri kunzwa vasinganzwi. Uyezve, kusvuta kusvuta kweamai kunogona kuisa mungozi mwana mucheche. Nokudaro, imba iyo vakadzi vane pamuviri vanogara vakanyanya kusvuta. Ichokwadi kuti kusvuta kunofanira kudziviswa zvachose kunyange kana mushure mokunge musikana.
Rega kusvuta | utano
Rega kusvuta - gara usina-kusvuta
Rega kusvuta kuburikidza ne hypnosis
Rega kusvuta kunze kwekusiya zviratidzo